Sida loo Dayactir dillaac iPhone Screen "
A screen iPhone dillaac noqon buuqa dhab ah gaar ahaan haddii aad si buuxda ugula dhacay a gazillion gogo 'yar. Waxaan ku noolnahay xilli halkaas oo nolol maalmeedkeena mareeg telefoonada naga. Sidaa darteed, si ay u shaqeeyaan isticmaalaya iPhone la shaashadda kasoo gaaray ama dillaac waa wax aad u adag. Qararka shaashadda sababi kartaa inuu muuqan gurracan oo aad u adag tahay in la akhriyo wax telefoonka. Screens dillaaca mararka qaar sababi taabtana phantom taas oo ah arrin kale oo halis ah sida xaqiiqada ah waxaa idiin rabin aad iPhone in ay sii wacaya dadka u gaar ah.
In khadadka soo socda aan soo bandhigno qaar ka mid ah hababka in a dillaac screen iPhone cusboonaysiiyey. Qaar ka mid ah, kuwaas oo u badan yihiin in lagu kalsoonaan karo ka badan kuwa kale, halka qaar ka mid ah ay yihiin miisaaniyad dheeraad ah oo saaxiibtinimo. Si aad u hesho inta badan ka soo qaadaan mid kasta oo iyaga ka mid ah, sii akhriska.
Helitaanka dillaac iPhone shaashad cusboonaysiiyey dukaanka ah Apple
Si aad u hesho dillaac iPhone screen cusboonaysiiyey dukaanka ah Apple, madaxa fudud ee aad ugu dhow Apple dukaanka. Ballan shaqaalaha u dayactirka dillaac screen iPhone. Waxaa had iyo jeer lagu talinayaa in aad la xiriirto daryeelka macaamiisha Apple ka hor wixii fursado kale. Tan waxa u sabab xaqiiqada ah in dayactirka shirkadda mar walba waa ay ka badan la isku halayn karo iyo qaybo ka bedel dhab ah ay yihiin. Laakiin, xasuuso in waxan oo dhan ayaa dalbanaya lacag; mararka qaarkood, wax badan oo dhan lacag.
Helitaanka dillaac iPhone shaashad cusboonaysiiyey dukaanka ah Apple aad ku kici doona inta u dhaxaysa $ 96- $ 118. Waxaa intaa dheer, in ay dhacdo iPhone 6, diyaar u ah inay bixiso culus $ 263 ahaan.
In aad dillaac screen iPhone cusboonaysiiyey dukaanka ah Apple ma tirtiri lahayd damaanad.
Dadka ka mid ah damaanad ama kuwa aan haysan lacag badan oo lagu qarashgareeyo ah dayactirka dukaanka Apple inta badan door bidaan dayactirka screen iPhone ay bixiyaan dukaamada telefoonka deegaanka ay. Dayactirka guud ahaan ku kici badan ka yar, laakiin baahida loo qabo in telefoon laga tegi leh farsamo ee maalin ama laba maalmood. Tani waa waxa ku saabsan dad badan oo sida telefoonka uu leeyahay macno dhamaan macluumaadka gaarka ah ee ku saabsan qofka. Waxaa intaa dheer, dukaamada maxaliga ah ee aan wali awoodin in ay bixiyaan dayactirka screen u iPhone 6 ama iPhone 6 Plus.
Dukaamada Local caadi ahaan aad bixisid aad u yar marka la barbar dhigo dayactirka dukaanka Apple. Tusaale ahaan, si ay u cusboonaysiiyaan iPhone 4 / 4s dayactirka screen ah laga bilaabo kaliya $ 55. Qiimaha dayactirka Shaashadda gaartay $ 95 sida aynaan u gudbin iPhone 5s.
In aad dillaac screen iPhone cusboonaysiiyey dukaanka degaanka ah ka tirtiri doonaa damaanad. Ma ogaan kartid haddii walax khaaska ah run ahaantii ahaato qarsoodi intii uu joogay dukaanka maxalliga ah. Dukaanka Local aan haysan dayactir shaashadda diyaar u ah iPhone 6/6 Plus.
Is ah dillaac screen iPhone online waxaa cusboonaysiiyey
Screen iPhone dayactirka Online ayaa la noqdo iyo aad u badan oo caan ah ayaa dhawaan. The online iPhone bixiyeyaasha adeegyada dayactirka screen inta badan u baahan tahay macaamiisha si loo bixiyo taleefannadooda iyaga via adeegyada boostada. Qaar ka mid ah waxay bixiyaan adeegyo qaadayo ka albaabka halka qaar ka mid ah leeyihiin way socdaan, in dukaamada. Waxaad u baahan tahay inaad ka taxadartaa si kastaba ha ahaatee, sida kuwan oo dhan ma bixiyaan adeegyo lagu qanci karo. Sidaas, had iyo jeer akhri dib u eegista tagay by macaamiisha hore iyo qaar ka mid ah cilmi baaris ku sameeyaan ka hor la tashado adeeg dayactir iPhone online.
Waxaad ka heli kartaa wax badan oo ka mid ah fursadaha binta uu ka soo xusho si waafaqsan miisaaniyadda. Inta badan iPhone shirkadaha hagaajinta online leeyihiin dayactirka screen u iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus heli karaa sidoo kale.
Helitaanka aad dillaac iPhone screen cusboonaysiiyey online ka tirtiri doonaa damaanad. Waxaad heli doontaa in ay sugaan 1 ilaa 3 maalmood si aad u hesho iPhone dib.
In guriga dillaac screen iPhone ah waxaa cusboonaysiiyey
Helitaanka screen gurigaaga iPhone dillaac cusboonaysiiyey waa fikrad eego cusub. Laakiin, waa mid ka mid ah aad u faa'iido badan. Door albaabka hagaajinta ballamaha buug shirkadaha online, aad xitaa qabsan kartaa ballan dukaan kafeega ee xaafaddaada ama xafiiska haddii ay sidaas tahay dalabaadka jadwalka. Nin ayaa dayactirka kuu iman doonaa maalinta loo qoondeeyey oo waqti iyo heli doonaa phone nus saac gudahood ka shaqeeya. Cusboonaysiintoodii oo dhammu waxay la samayn doonaa idinka soo hor jeedda.
Binta waa la awoodi karo, guud ahaan laga bilaabo $ 77 ilaa $ 133 u iPhone 4, 5 ama 6.
Helitaanka aad dillaac iPhone screen cusboonaysiiyey guriga ka tirtiri doonaa damaanad. Albaabka shirkadaha albaabka guud ahaan ma taageero u iPhone 6 Plus bixiyaan.
Sixidda ah dillaac iPhone screen guriga
Xirmooyinka bedelka DIY screen iPhone oo dhan waxaa laga heli karaa internet-ka ka yar $ 60 (screen ka mid ah). Haddii aad si kastaba ha ahaatee, rabto in aad hesho dhab Apple a soo saaray iPhone baaraan aad ka heli kartaa in aad online iyo yeelo qalabka ka meel kale. Next, waxaad u baahan doontaa inaad kor eega qaar ka mid ah DIY Casharrada dayactir screen iPhone iyo raadin ah oo ku saabsan dhibaatooyinka ay suurtagal tahay in mid ka mid ah wajihi karo inta ay socoto. Ayaa dayactir DIY screen iPhone oo dhan ma dhan in ay adag tahay haddii aad leedahay qaar ka mid farsamo aqoonta. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa ku dhaqmaan qaar ka mid ah daryeelka, taxadar iyo dulqaad.
Tani waa habka ugu jaban dayactir ah dillaac screen iPhone.
DIY A dillaac iPhone dayactir screen ka tirtiri doonaa damaanad. Haddii aad leedahay waayo-aragnimo ma qalab iyo qalabka furitaanka, waxaa jira wax badan in xumaan kara.
> Resource > iPhone > Sidee Dayactirka dillaac iPhone Screen